नासाले सन् २०२२ मा एक छुद्रग्रहलाई ठक्कर दिनका लागि अन्तरिक्षयान पठाउँदै ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
नासाले सन् २०२२ मा एक छुद्रग्रहलाई ठक्कर दिनका लागि अन्तरिक्षयान पठाउँदै !
प्रकाशित मिति १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । नासाले पहिलोपटक यस्तो अन्तरिक्षयान लन्च गर्दै छ जो सन् २०२२ मा एक छुद्रग्रहसँग गएर ठोक्किने छ । अमेरिकी स्पेस एजेन्सीले बताएअनुसार पृथ्वीको रक्षा प्रणालीलाई दर्शाउनका लागि यस्तो गर्न लागिएको हो ।
द डबल एस्टोरोइड टेस्ट(डार्ट)ले बाइनरी एस्टोरोइड मण्डलमा रहेको एक सानो मुनलेटलाई प्रहार गर्ने केवल एक मौका मात्र पाउनेछ ।
हाल यो मिसनलाई सफल बनाउनका लागि मेरिल्याण्डमा रहेको जोन होप्किन्स अप्लाइड फिजिक्स ल्याबरोटरी र अन्य अमेरिकी स्थानहरूमा तीब्र गतिमा काम भइरहेको बताइएको छ । १०२१ को गर्मी मौसममा यानलाई प्रक्षेपण गरिने योजना रहेको बताइएको छ ।
कृषि विकास बैंकमा ३८४ जनाका लागि जागिर खुल्याे
काठमाडौं । कृषि विकास बैक लिमिटेडले विभिन्न पदमा ३८४ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६…
रुपन्देही । रुपन्देहीको देवदह–८ विशालनगरका २८ वर्षीय सुमन थापाको शनिबार राति हत्या भएको छ । निधार र छातिमा लागेको…
काठमाडाैं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सेतो हात्ती बनेको ६ थान चिनियाँ जहाज निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारी भएको…
‘इन्काउन्टर’ विरोधीहरू एकपटक याे पढ्ने की ?
हत्यामा जेल पर्ने अपराधी सुध्रिएर समाजमा पुनस्र्थापना भएका घटना अति कम छन् । बरु, उसको अपराधको दायरा अझ बलियो…
यस्तो पापि श्रीमान, गर्भवती हुँदा आफ्नै श्रीमानले गराए १० जनाबाट सामूहिक बलात्कार
काठमाडाैं । आफू गर्भवती भएका बेला आफ्नै श्रीमानले १० जना युवाकबाट सामूहिक बलात्कार गराइ चरम यातना दिएकी एक महिला…